Warbixin: Nidaamka qaabilaadda degmooyinka ee soogalootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda suuqa shaqada Ylva Johansson. Sawirle: Claudio Bresciani / TT
Warbixin: Nidaamka qaabilaadda degmooyinka ee soogalootiga
Xisbiyada ayaa ka xaajooneya war-bixinta
La daabacay fredag 14 november 2014 kl 15.31
Labada isku-duwe dawladeed ee arrimmaha soo galootiga oo kulammo la qaatay dhammaan hoggaannada degmooyinka uu dalku ka kooban yahay ayaa toddobaadkan war-bixintoodii u soo ban-dhigey wasiiradda suuqa shaqada Ylva Johansson.
Qorshooyinka ay soo ban-dhigeen ayuu ka mid yahay in la helo xeer degmooyinka ku khasbaya diyaargarow la xiriira qaabiladda soo-galootiga.
Gunnar Hedberg, oo ka tir-san xisbiga Modaraterna, kana mid ah labada isku duwe ee dawladdu u xil-saartay arrimmaha soo-galootiga ayaa iminka ku howlan sidii ey u abuuri lahaayeen urur howl-wadeenno ee howlahaa ambaqaad ku sameeya.
- Si loo dardar-geliyo howlahan ayey noola muuqataa in degmooyinku yeeshaan qorshe u diyaargarow ee qaabilaadda soo-galootiga, hase yeeshee ma dooneeyno inaannu khasab kaga dhigno maamullada degmooyinka qaabilaadda iyo in loo cayimo tirada ey qaadaneyaan, hase yeeshee ay ka muhiim-san tahay inay halkeeda ka sii socoto sawirka wanaag-san ee laga heysto soo-galootiga guud ahaan.
Gunnar Hedberg iyo Lars Stjernkvist kana tir-san hoggaanka maamulka degmada Norrköping oo wada-jir ay dawladdu howshan ugu xilsaartay ayaa kulammo la qaatay maamullada degmooyinka laga soo bilaabo bishii jannaayo ee sannadka, sheegeyna iney degmooyinka dhammaantood u arkaan wanaag qaabilaadda soo-galootiga, hase yeeshee ey qaar badan oo ka mid ahi u baahan yihiin taageero dheeri ah. Intaa waxaa dheer in loo baahan yahay nidaam ku dhisan cadaalad oo la saadaalin karo sidii soo-galootiga loo qaabili lahaa, sida uu sheegay Gunnar Hedberg.
Qaar badan ee degmooyinka ka mid ah ayaa rajeeynaya in soo-galootigu gacan ka geey-san karaan kor u kaca tirada bulshada. Gunnar Hedberg, wuxuu intaa raaciyay inay sidaa daraadeed ay caqabad tahay in qaar badan oo soo-galootiga ka mid ahi ka soo guuraan degmooyinkaa oo ku soo ururaan magaalooyinka waaweyn, magaalooyinkaasina oo ey ka jiraan dhibaatooyin la xiriira hooy la'aan.
- Magaalada Jikaago ee carriga Mareeykanka waxay boqol sannadood ka hor ahayd magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Iswiidhen, halkaasina oo ey isku urursadeen iswiidhish badan oo ka socdaalay Iswiidhen una qaxey dalka Mareeykanka. Sidaa si la mid ah ayey soo-galooti badani u doonaan iney qaraabadood iyo luuqaddooda ka ag-dhowaadaan. Waxaan middaa ka soo jeedinney in bal laga eego dhanka haddii saameeyn dhanka dhaqaalaha laga eegi karo iyo in la siiyo dhaqaale ku qancin kara in lagu nagaado carrigaa.
Si haddaba loo dhimo soo-galootiga ku sugan xeryaha qaxootiga, oo marar badan aan laga war-gelin maamullada degmooyinka kolka laga wada xaajooneyo meeleeyntooda, ayaa war-bixintan sidoo kale lagu soo ban-dhigey in wakaaladda socdaalku yeelato hooyo ay wakaaladdu mulki u leedahay. Waa in lagu howl-galo iyada oo lagala tashaneyo maamullada degmooyinka, si loogu qanciyo in degmooyinku qaabilaan dadyoowga dalka ku cusub ee deggenaanshaha lagu siiyey.
Wasiiradda suuqa shaqada Ylva Johansson, oo ah hoggaamiyaha war-bixintan faraha loo geliyey, ayaa jimcada waxey la kulmi doontaa iyada oo ey wada socdaan wasiirka socdaalka wakiillo ka socda xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka marka laga reebo xisbiga Sverigedemokraterna, iyada oo qorshahooduna yahay sidii ey uga wada xaajoon lahaayeen hagaajinta nidaamka qaabilaadda soo-galootiga iyo qeybin cadaalad ku dhisan.
- Waxaan rajeeyn iney ka soo baxaan fikirro wax ku ool ah oo laga soo dhiraandhiriyey war-bixintan, sida uu sheegay Gunnar Hedberg, kana mid ah xubnaha xisbiga Moderaterna ugu jira baarlamanka, isla-markaana ka mid ah labada isku-duwe ee dawladdu u xil-saartay qaabeeynta nidaamka qaabilaadda soo-galootiga.